४८% ले बढ्यो फाइनान्स कम्पनीको नाफा, कुनको वित्तीय अवस्था कस्तो ? (विवरणसहित) - Arthatantra.com
४८% ले बढ्यो फाइनान्स कम्पनीको नाफा, कुनको वित्तीय अवस्था कस्तो ? (विवरणसहित)
काठमाडौं । गत आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा फाइनान्स कम्पनीहरुको नाफामा सुधार देखिएको छ । संचालनाम रहेकामध्ये १५ कम्पनीले सार्वजनिक गरेको गत आवको चौथो त्रैमासिक वित्तीय अवस्थाले यस्तो देखाएको हो ।
गत आवमा फाइनान्स कम्पनीहरुको नाफा ४७.८२ प्रतिशतले वृद्धि भएको छ । गत आवमा कम्पनीहरुले १ अर्ब ९७ करोड १७ लाख २६ हजार रुपैयाँ नाफा गरेका हुन् । अघिल्लो आवमा भने कम्पनीहरुको नाफा १ अर्ब ११ करोड ७७ लाख ७१ हजार रुपैयाँ मात्र रहेको थियो ।
गत आवमा तीन फाइनान्स कम्पनीको नाफा घटेको छ भने अन्यको सुधार देखिएको छ । गत आवमा जानकी फाइनान्स २०.२८ प्रतिशत, समृद्धि फाइनान्सको ८६.३१ प्रतिशत र नेपाल फाइनान्सको ४१.२१ प्रतिशतले नाफा घटेको हो ।
गत आवमा सबैभन्दा बढी नाफा मञ्जुश्री फाइनानसको रहेको छ । कम्पनीले गत आवमा ५६ करोड ८१ लाख १८ हजार रुपैयाँ नाफा गरेको छ । जुन अघिल्लो आवको तुलनामा ११५.८१ प्रतिशतले बढी हो । अघिल्ला आवमा कम्पनीले २६ करोड ३२ लाख ४४ हजार रुपैयाँ नाफा गरेको थियो ।
यता, अघिल्लो वर्ष नोक्सानीमा रहेको गोखार्ज फाइनान्सले भने नाफामा छलाङ नै मारेको छ । अघिल्लो वर्ष ७ करोड ९४ लाख ९३ हजार रुपैयाँ नोक्सानीमा रहेको कम्पनीले गत आवमा भने २० करोड १८ लाख ९६ हजार रुपैयाँ नाफा कमाएको छ ।
यस्तै, श्री इन्भेष्टमेन्ट एण्ड फाइनान्सको नाफामा भने झिनो सुधार देखिएको छ । अघिल्लो वर्ष ११ करोड ३७ लाख ५४ हजार रुपैयाँ नाफा कमाएको कम्पनीले गत वर्ष भने ०.२५ प्रतिशतले वृद्धि भएको छ ।
त्यसैगरि गत आवमा आईसीएफसी फाइनान्सले १९ करोड ६२ लाख ७३ हजार रुपैयाँ नाफा कमाएको छ । अघिल्लो वर्षको तुलनामा कम्पनीको नाफा ८८.०८ प्रतिशतले बढी हो ।
गत आवमा पोखरा फाइनान्सको ७४.०५ प्रतिशत, गुडविल फाइनान्सको ६९.८५ प्रतिशत, गुहेश्वरी मर्चेण्ट बैंकिङको ६२.४६ प्रतिशत, रिलायन्स फाइनान्सको ३३.२३, सेन्ट्रल फाइनान्सको २६.४९, प्रोग्रेसिभ फाइनान्सको १७.५९, मल्टीप्रपोजको ११.७१ र बेष्ट फाइनान्स ६.५४ प्रतिशतले नाफा वृद्धि भएको छ ।
वि.सं.२०७८ भदौ १८ शुक्रवार १५:५७ मा प्रकाशित
अघिल्लाे १५ अर्ब बराबरको विकास ऋणपत्र नेप्सेमा सूचिकृत
पछिल्लाे तेह्रथुपम पावरको आईपीओ: ७४ हजार ४ सयले १०/१० कित्ता पाउने, यस्तो छ बाँडफाँडको तयारी !